SANBOORKA AMA ELERJIGA ADIGOO XAAFADAADA JOOGA ISKA DAAWEE. – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka SANBOORKA AMA ELERJIGA ADIGOO XAAFADAADA JOOGA ISKA DAAWEE.
SANBOORKA AMA ELERJIGA ADIGOO XAAFADAADA JOOGA ISKA DAAWEE.
U #SHARE gareeya walaalihiin ugana yeera halkaan qof la dhibtooda sanboorka si ay uga faaiideystaan daawadaan iyo Tallo soo jeedintaan.
Wixii su’aalaha oo khaas ah qofkii qaba qaybta fariimaha khaaska ah ha iga soo waydiiyo.
Mahadsanidiin walaalayaal waa ii dhiiri galin in aad ila socotaan si aan u sii wado howshaan.
Mowduuca inoo xiga insha allah wuxuu noqon doonaa Gaaska.
Previous articleWasaaradda waxbarashada XFS oo sheegtay in dhawaan la shaacin doono natiijada imtixaanka dugsiyada sare ee dalka
Next articleHaayadda Shaqaalaha Oo Tiro-koob Ka Bilawday Burco
“10 Faa’iidooyin oo layaab leh” oo laga helo ‘Dabacasaha’ Inbadan dadka...